Rakarukwa Wire Mesh, Stainless Steel Wire Mesh - DXR
DXR Wire Mesh ari mukugadzira & vanotengesa combo kuti waya yepasi uye waya jira mu China. Aine Track chinyorwa anopfuura 30 makore zvebhizimisi uye michina rokutengesa tsvimbo anopfuura 30 makore ruzivo vasanganiswa.
DXR muchiso sezvo yakakurumbira muchiso muna Hebei Province kwave vakanyorwa munyika 7 pasi pose kuti vanozivikanwa kudzivirirwa. Mazuvano, DXR Wire Mesh ndeimwe yenzvimbo yemakwikwi simbi waya pajira riya vagadziri muna Asia.
Stainless Steel Wire Mesh kuti tarisiro
Zvibereko Stainless simbi waya pajira riya indasitiri anosvika China, kunyange akafukidza nyika yose. mhando iyi mishonga iri China dzinowanzotsigi- aivigirwa kuUnited ...
Kusarudza Kwaungaita High Quality Stainless Steel Wire Mesh Manufacturers
Nokuti Stainless simbi waya pajira riya vatengi, ose zuva uchagamuchira zviuru zvetsamba okukura. Nemabhii zhinji saka kukura, idambudziko neanotambudza sei kusarudza yepamusoro vagadziri. Chokutanga, Face kuna Face. Bvisai vatengesi. Rangarira mutengesi haana fekitari. Izvi zvichaita kubvisa dzakawanda vatengesi, asi ...
Sei Edzai Kusimba kutorwa Stainless Steel Wire Mesh
No zvokunyama zvikanganiso, kunyanya zvinoratidzwa zviri nickel, Stainless simbi, nickel kugutsikana, somuenzaniso 304 iri 8% -10%, asi muna China, 304 Stainless simbi nickel zviri 8%, 9%, kana kana uchida 10% nickel kugutsikana Stainless simbi pajira riya, vanoda mirayiridzo inokosha. Wire dhayamita hapana kukanganisa, vamwe nokutengesa kunyanya nemitengo yakaderera, mumwe L ...
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota siya email nesu uye tichava uchikurukura mumaawa 24.
Wire Mesh Stainless Steel , Kwakakurudzira Wire Mesh, Plain Steel Wire Cloth , Plain dzakarukwa Wire Mesh , Stainless Steel Hardware Cloth, Stainless Steel Mesh Cloth ,